Warzone2100 lalao paikady sy tetika ara-potoana | Avy amin'ny Linux
Raha iray amin'ireo ianao tian'izy ireo ny lalao fanamby, lalao tetika sy tetika Manasa anao aho hijery ity lalao manaraka ity fa hizara aminao izahay. Androany isika hiresaka war zone 2100 izay lalao video loharanom-baovao malalaka sy misokatra.
war zone 2100 dia lalao video multiplatform izay azo alefa amin'ny Windows, Linux ary PlayStationWarzone 2100 dia lalao iray izay tsy nisy ho an'ny Windows sy PlayStation fotsiny tamin'ny voalohany, fa taona maro taty aoriana dia navoaka ny lalao niaraka tamin'ny kaody loharano niavian'izany.
Tamin'ity fomba ity dia afaka i Warzone 2100 ary navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe GNU ny kaody.
Tamin'ny taona 2085 dia tsy nahomby ilay rafitra noforonin'i Etazonia hisorohana ny hetsika nokleary, fa tsy miaro amin'ny fanafihana iray, ny rafitra NASDA dia nisafotofoto ary nandefa balafomanga hamely ireo tanàna lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Raha izany no mitranga, tsy ela dia hamaly an'i Amerika Avaratra ireo firenena lasibatra amin'ny lalao balafomanga.
Nanjavona ireo sivilizasiona samihafa eto an-tany taorian'ny ady nifanaovana tamin'ny fitaovam-piadiana niokleary. Raha ny ankamaroan'ireo sisa velona dia mamorona tarika scavenger voalamina mba ho tafavoaka velona, ​​vondrona olona iray, izay miantso ny tenany hoe "Ilay Tetikasa", no mitady fomba hanarenana ny sivilizasiôna amin'ny alàlan'ny haitao prewar.
1 Momba ny Warzone 2100
2 Ahoana ny fametrahana Warzone 2100 amin'ny Linux?
Momba ny Warzone 2100
Este lalao 3D tanteraka io ary misy ny saritany an-tsarintany. Amin'ity lalao video ity dia mivezivezy manodidina ny sari-tany ny fiara mifanaraka amin'ny tsy fanarahan-dalàna any amin'ny faritra, ary azo sakanan'ny havoana sy havoana ireo mpiorina.
Amin'ny tanjon'ireo iraka dia aseho ny lafiny RTT amin'ny lalao, ny ambaratonga tsirairay amin'ny lalao, tsy misy ny voalohany sy ny farany, dia manana fotoana ambony indrindra tokony hamitan'ny mpilalao ny iraka ampanaovina azy.
teo anivon 'ny Warzone 2100 endri-javatra lehibe afaka miavaka isika:
Units (fiara) azo namboarina mikasika: chassis (izay, ohatra, mitaky lanja sy fahefana); rafitra fanamafisam-peo (kodiarana, rojo mandady na hovercraft); ary nanampy zavatra (toy ny fitaovam-piadiana na fitaovana).
Warzone 2100 dia manome lanja manokana ireo sensor sy radara hamantarana ireo singa sy handrindrana ireo fanafihana amin'ny tany.
ny Ireo sensor ho fanoherana bateria dia mahita ny fitaovam-piadiana ataon'ny fahavalo amin'ny alàlan'ny fanarahana ny akorany sy ny zana-tsipikan'izy ireo mba hikajiana ny toerana misy azy ireo handrindrana ny fanafihana mitam-piadiana amin'ny fahavalo. Ireo sensor VTOL dia miasa ho toy ny sensor fototra, mandrindra ny fanafihana VTOL fotsiny hahitana sy handrava ny baterin'ny fahavalo.
Fanamafisana lehibe no apetraka amin'ny artillery: na dia fitaovam-piadiana ady mivantana sy akaiky sy fitaovam-piadiana manohitra fiaramanidina aza no azo karohina sy novolavolaina, ny artillery dia singa iray lehibe amin'ny fanafihana ny tobin'ny fahavalo sy ny tobiny.
Ny teknolojia dia afaka mahazo amin'ny alàlan'ny fanangonana artifact navelan'ny ivon'ireo fahavalo simba.
Ny fikarohana dia misy andiany lava amin'ny fanatsarana kely, fanampiny amin'ny fitaovam-piadiana, fender ary chassis.
Ireo singa dia afaka mampiakatra ny laharany manomboka amin'ny Rookie mankany amin'ny Trained and Professional.
Ny lalao dia manolotra fomba fampielezan-kevitra, multiplayer ary mpilalao tokana. Hazo teknolojika midadasika misy haitao 400 mahery, miaraka amin'ny rafitry ny famolavolana singa, ahafahana mampiasa karazana tetika sy tetika maro karazana.
Ahoana ny fametrahana Warzone 2100 amin'ny Linux?
Si te-hametraka ity lalao ity amin'ny rafitrao ve ianao?, azontsika atao amin'ny fomba tsotra amin'ny fianteherana amin'ny fonosana lalao izany afaka mamakivaky ny Snap isika.
ihany tsy maintsy manana ny fanohanan'ity teknolojia ity isika ao amin'ny rafitray. Mba hametrahana ny lalao dia hanokatra terminal eo amin'ny rafitray izahay ary hitendry an'ity baiko manaraka ity:
Amin'ny faran'ny fametrahana manohy mitady ny lalao ao amin'ny menio fampiharana izahay hanamarina fa napetraka tsara izy io ary azontsika atao ny manomboka mankafy ity lalao mahafinaritra ity.
Raha tsy mahita fidirana amin'ny lalao ianao dia azonao atao ny mampandeha azy avy eo amin'ny terminal rehefa mitendry:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » Warzone2100 lalao paikady sy tetika tena izy
rohy anatiny dia hoy izy:
WZ2100 no lalao tiako indrindra hatramin'ny nanombohako nampiasa Linux mihoatra ny 15 taona lasa izay, ary hitako foana ity lalao ity hita ao amin'ny magazay fampiharana Linux, ka heveriko fa ny fomba mora indrindra handehanana any amin'ny magazay misy ireo diso ary any dia hisy izany be, na tadiavo amin'ny Synaptic, na apetraho amin'ny console "sudo apt install warzone2100". Tsy azoko hoe maninona no mahazo an'io zavatra io amin'ny tso-po !!!
Mamaly an'i Einnerlink
ektod dia hoy izy:
Iray amin'ireo tsara indrindra, saingy rehefa afaka taona vitsivitsy dia tsy maintsy ekeko fa somary leo aho satria raha milalao multiplayer dia mila mandresy amin'ny loteria, hahaha arahaba
Mamaly an'i ektod